#RashiFall | Suvadin !
आज ०९ साउन २०७६ बिहिवार मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन् । मित्र वा आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । सांस्कृतिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । छोटो दुरीको लाभदायक यात्रा हुनेछ । मिथुन मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा) आत्मविश्वास र...
Sb Saud 287 0
Dammar Giri 351 0
Dammar Giri 390 0
काठमाडौं,१९ फागुन मेष - बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न निकै प्रयत्न गर्नुपर्ला। प्रक्रिया बिग्रनाले काममा बाधा हुन सक्छ। गोपनीयतामा सजग रहँदै प्रयत्न गर्दा विशेष जिम्मेवारी हातलागी हुनेछ। पुरुषार्थी काम गर्दै लाभ उठाउन सकिनेछ। स्वार्थका लागि साइनो गाँस्नेहरूबाट विशेष सजग रहनुहोला। मिहिनेतले लक्ष...
Dammar Giri 134 0
काठमाडाैं,६ फागुन मेषः– समय खराव देखिन्छ। जोखिम मोलेर कुनै काम नगर्नु होला। आकस्मिक खर्च वृद्धिले कार्य क्षेत्रमा असर पुग्नेछ। व्यवहारिक सहयोग गर्ने कोहि हुने छैनन। अरुको काम गरेर न जश न शान्ति मिल्नेछ। पारिवारिक समस्या बढ्नेछन्। काम काजमा बाधा अवरोध आउने देखिन्छ। व्यापार घाटा बढ्नेछ।...
Dammar Giri 236 0
काठमाडौं,४ फागुन मेष – काममा स्फूर्ति बढ्नेछ , रमाइलोमा दिन बित्नेछ । वृष – खानपिनमा मस्त भइनेछ , धनको सहयोग पाइनेछ । मिथुन– स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ , काममा प्रगति देखिनेछ । कर्कट – पेैसाको बचत कम हुनेछ , मनमा डर पैदा हुनेछ । सिंह –...
काठमाडाैं,३ फागुन मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) अनावस्यक खर्चमा कमि आउनेछ। आफ्नै बाहुबलमा समस्याको समाधान खोज्नु पर्नेछ। उत्पादनशिल कार्य, सांगितिक क्षेत्र तथा होटल व्यवसायबाट सामान्य खालको लाभ हुनेछ। पारिवारिक सहयोगमा महत्वपूर्ण काम हुनेछन्।सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ। नोकरी तथा राजनीतिमा...
काठमाडौं,२९ माघ मेषः चिनिने अवसर पाइनेछ, किनमेलमा व्यय हुनेछ। वृषः नयाँ बस्तु प्राप्ति हुनेछ, बढी खर्च व्यहोर्नु पर्नेछ। मिथुनः धनको सरसहयोग पाइनेछ, लगानीमा फाइदा मिल्नेछ। कर्कटः राजनीतिक लाभ पाइनेछ, अरुको मन जित्न सकिनेछ। सिंहः भाग्यले काम सफल हुनेछ, परोपकारमा मन जानेछ। कन्याः काम अधुरो हुन...
Dammar Giri 160 0
काठमाडाैं,२८ माघ मेषः– काममा देखिएका समस्या कम हुनेछन्। शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति बढ्नेछ। पढाई लेखाईमा थोरै ध्यान जानेछ। व्यापार व्यवसायमा सामान्य सुधार आउनेछ। अनावस्यक खर्चमा कमि आउनेछ। आफन्तबाट सहयोग सहानुभुति मिल्नेछ। महत्वकाँक्षा जाग्नेछ। उत्तम भोजन र आसन प्राप्तिको योग देखिन्छ...
काठमाडौं,२६ माघ मेषः घाटा बेहोर्नु पर्नेछ, सरसामान हराउन सक्नेछ । वृषः आम्दानीको स्तर बढ्नेछ, व्यापारमा सन्तुष्टि मिल्नेछ । मिथुनः प्रशंसाको भागीदार भइनेछ, सरकारी फाइदा पाइनेछ । कर्कटः भाग्यले साथ दिनेछ, अधूरा काम बन्नेछन् । सिंहः आलोचना खेप्नुपर्नेछ, अचानक काम...
काठमाडौं, २३ माघ मेषः व्यवसायमा लाभ मिल्नेछ, न सोचेको धन हात लाग्नेछ। वृषः राजनीतिमा लाभ पाइनेछ, आफ्नो उपायले काम बन्नेछ। मिथुनः सामाजिक काममा लाग्नु पर्नेछ, धर्ममा मन जानेछ। कर्कटः योजना बिग्रिनेछ, काममा अस्तव्यस्तता आउनेछ । सिंहः व्यवसायिक यात्रा हुनेछ, सभा गो...
मेषः– बाह्य कुरा भन्दा आन्तरिक कुरालाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नु होला। अरुको पूर्ण भरोसामा काम नगर्नु होला। कार्य क्षमतामा कुनै कमि आउने छैन। व्यापार व्यवसायमा प्रगति हुनेछ। आफन्तको सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढि उपलब्धि कम हुनेछ। पढाईमा कम ध्यान जानेछ। वृषः– स...
Dammar Giri 377 0
मेषः– परिस्थितिलाई वुझेर काम गर्न सके उपलब्धि राम्रै हात लाग्नेछ। समस्याको पहिचान गरेर मात्र अगाडि बढ्नु होला। कार्य क्षमतामा कुनै कमि आउने छैन। व्यापार व्यवसायमा सुधारका संकेत देखिने छन्। आफन्तबाट सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ। पढाई लेखाईमा भने सोचे जस्तो प्रगति हुने छैन। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ।...
काठमाडौं,१८ माघ मेषः अधूरा काम बन्नेछन्, वैदेशिक फाइदा मिल्नेछ। वृषः काम बीचमा रोकिनेछ, गुप्त शत्रु जाग्नेछन्। मिथुनः रमाइलोमा दिन बित्नेछ, पारिवारिक मेलमिलाप हुनेछ। कर्कटः वादविवाद साम्य हुनेछ, राम्रो काममा खर्च हुनेछ। सिंहः अध्ययन क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ, सन्तत...
काठमाडौं,१४ माघ मेषः– दैनिक काम सुचारु रुपमा अगाडि बढ्नेछन्। सक्रियता बढाउनु होला। काममा ढिला सुस्ति गरेमा उपलब्धि थोरै हात लाग्नेछ । तर आजको अधिकाँश समय भने अनुकुल नै देखिन्छ। वैदेशिक कार्यबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। जीवन साथिको सहयोग प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन हुने नै...
काठमाडौं,१३ माघ -सूर्य शौर्यमथेन्दुरुच्चपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं । सद्वुद्धिं च वुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः शुभं शं शनिः ।। राहुर्वाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं । नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहाः ।। मेषः– खेलकुदमा अभिरुची बढ्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा भूमिकाको खोजी हु...
२०७५ माघ १० गते बिहीबार तदनुसार ई. सं. २०१९ जनवरी २४ तारिख, आजको चाडपर्व र उत्सव : काशी, वाराणसी, भारतमा बडा गणेश उत्सव, आजको मूहुर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), माघ कृष्णपक्षको चतुर्थी तिथि। मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) मनोरञ्जन र खेलवाडले लक्ष्यप्राप्तिमा कठिनाइ उत्पन्न गर्नेछ।मित्...
अाज मिति २०७४ साल माघ २७ गते शनिबार, यस्ताे छ तपार्इकाे राशीफल
मेष राशी – साथीभाईसँग समय बित्नेछ। धनार्जनका नयाँ स्रोतहरु पत्ता लाग्नेछन्। दिनको उत्तरार्धमा धन खर्च हुनेछ। वृष राशी – कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्नेछ। रमाइलो यात्राको योग रहेको छ। शुभ समाचार सुन्न पाइएला। मिथुन राशी – शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ। काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिन...
Suvadin Correspondent 864 0